के तपाईंलाई थाहा छ लज्जावती झारको अदभूत औषधिय गुण ? यसरी खानुहोस घरमै बनाएर कयौं रोग चैट – Nepali Janata Khabar
के तपाईंलाई थाहा छ लज्जावती झारको अदभूत औषधिय गुण ? यसरी खानुहोस घरमै बनाएर कयौं रोग चैट
सोमबार २३ चैत्र, २०७७
आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धान अनुसार भाँचिएको हड्डि रर मांस-पेशिको आंतरिक घाउको उपचारको लागि लाजवन्ति झार अति उपयोगि हुन्छ। त्यस्तै, लाजवन्ति झारको जरा तथा बिउको चूर्णलाई दूधसंग मिलाएर खानाले पुरूषमा हुने हुने वीर्यको कमीलाई धेरै कम गर्दछ। लाजवन्ति झारको पातको धुलोलाई मख्खनसंग मिलाएर बाबाशिरको घाउमा दिनस्को दुइ वा तिनपटक लगाउनाले छिट्तै निको हुन्छ। त्यस्तै, यस्को पातलाई पिसेर नाइटो वरिपरि लगाउनाले धेरै पिसाब आउने समस्या बन्द हुन्छ।
यसको पातको काड-पानी बनाएर खुवाउनाले मधुमेहको रोगिलाई धेरै फाइदा गर्छ। त्यस्तै, यसको बिउको धेउलो बनाएर नियमित सेवन गर्नाले शारिरिक दुर्बलता पनि कम हुन्छ।
लाजवन्ति र र अश्वगंधाको जरालाई समान मात्रामा मिलाएर पिस्ने र लेप तयार गरेर स्तनमा हल्का मालिस गर्नाले स्त्न झोलिने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। गन्दे नामक झारको झोलले काटेको ठाउँमा बगेको रगतलाई तुरुन्तै निको बनाए जस्तै लाजवन्ति झारले पनि काटेको घाउलाई निको बनाउँछ। यति मात्रै होइन यो झार बहु उपयोगि छ। यो झारको जराको दुइ ग्राम चूर्ण दिनमा तीन पटक मनतातो पानीसंग खानाले बाबाशिर वा अन्य कारणबाट हुने आन्तरिक घाउ छिट्टै निको हुने आचार्य बताउछन्।
आज चैत्र २३ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस एक सेयर गरी कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गरौ
आयल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कति पुग्यो त ?